Ukuhambelana kweScorpio Love - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Ukuhambelana kweScorpio Love
Abathandi beScorpio bacingelwa ukuba bahambelana kakhulu neTaurus kwaye ubuncinci buhambelana neLibra. Ukuba luphawu lwamanzi oluhambelana nomqondiso we-zodiac kukwaphenjelelwa bubudlelwane phakathi kwezinto ezine zodiac: Umlilo, uMhlaba, umoya kunye naManzi.
Abo bazalelwe eScorpio babonisa izinto ezithile xa benxibelelana nolunye uphawu lweempawu zodiac ezilishumi elinanye kunye nabo. Nganye yezi zinto zidityanisiweyo zibangela ukuxoxwa ngokwahlukeneyo.
Kwisicatshulwa esilandelayo siza kuchaza ngokufutshane konke okuhambelana phakathi kweScorpio kunye neminye imiqondiso yeenkwenkwezi.
Ukuhambelana kweScorpio kunye neeAries
Banokwabelana ngamaxesha amangalisayo kunye kwaye banegalelo kwimpilo yomnye nomnye kodwa oku kuza nexabiso lomzabalazo oqhubekayo wokugcina izinto ezilinganisweni. Obu budlelwane bukhula phantsi kweendlela zokuziphatha ezinamandla ezivela kumacala omabini.
Uphawu lweZodiac lwangoFebruwari 26
Ukuhambelana kweScorpio kunye neTaurus
Olu phawu lwamanzi kunye nolu phawu lomhlaba ngumdlalo onokuhamba nangayiphi na indlela! Banokuba sesona sibini sinomdla kakhulu namhlanje kwaye baphikisane njengeentshaba ezinamandla ngolunye usuku.
Ukuhambelana kweScorpio kunye neGemini
Olu phawu lomoya kunye nolu phawu lwamanzi ngumdlalo ongaqhelekanga! Ngokumangalisayo iGemini ibonakala ngathi iyayiqonda iScorpios isidingo sedrama kunye nothando.
Nangona kunjalo iScorpio inenkani kwaye ngokuqinisekileyo iya kufikelela kwimithambo-luvo yeyona nto izolileyo kwaye iqondayo iGemini. Ngokuzijonga nje kubonakala zilungile kodwa ekuhambeni kwexesha kunye nokudakumba kunokuvela xa kushiywe kungaphikiswa.
Ukuhambelana kweScorpio kunye neCancer
Le miqondiso mibini yamanzi ngumdlalo olula! Okumangalisa ngokwaneleyo kukuba, aba babini bayakwazi ukwenza ukuqonda okupheleleyo kwizinto abanazo ngokufanayo kunye nezinto ezihamba ngokuchaseneyo.
Kubonakala ngathi benza ukuhamba okuhle kwimanyano yabo kwaye ke babekelwe iinzame zoyilo ukuba banamathele kunye.
Ukuhambelana kweScorpio kunye noLeo
Kwelinye icala iScorpio kufuneka iqale ukuziqhelanisa kwaye iguquguquke ngakumbi xa isiza kwiminqweno kaLeo. Ngokumalunga nezothando, bobabini bayamnkela kwaye banokwenyama ukuya kwinqanaba elithile.
Ukuhambelana kweScorpio kunye neVirgo
Ukuhambelana kweScorpio kunye neLibra
Olu phawu lomoya kunye nolu phawu lwamanzi ngumdlalo ongaqhelekanga! Akukho namnye kuni oqondayo ukuba kutheni umtsalane komnye kodwa ukhona.
Mhlawumbi bobabini baziva isidingo sokubenza nzima ubomi babo kwaye ngamanye amaxesha oku kulunga kubo.
ILibra iyakwazi ukucaphukisa i-Moody Scorpio kwaye iya kubonelela ngentuthuzelo kunye nozinzo ngelixa iScorpio ihlala yoyilo kwaye inempilo.
Ukuhambelana kweScorpio kunye ne Scorpio
Le miqondiso mibini yamanzi ngumdlalo onokuhamba nangayiphi na indlela! Abantu ababini abanengqiqo abanembono enobuchule kuzo zonke izinto.
Zezona zibini zibuthathaka okanye idrama esisigxina. Ukufana ngokufanayo kubangela ukuqonda okungcono okanye ukuphikisana okuqhubekayo.
Umqondiso we-zodiac we-Agasti 18
Kuxhomekeke kwaba babini ukuba banomdla kangakanani ukwenza izinto zisebenze.
Ukuhambelana kweScorpio kunye neCapricorn
Olu phawu lomoya kunye nolu phawu lwamanzi ngumdlalo ongenakwenzeka! Akukho namnye kuni oqondayo ukuba kutheni umtsalane komnye kodwa ukhona.
Mhlawumbi bobabini baziva isidingo sokubenza nzima ubomi babo ngokungeyomfuneko. Nangona kunjalo iScorpio inenkani kwaye ngokuqinisekileyo iya kufikelela kwimithambo-luvo yeyona nto izolileyo kunye nokuqonda i-Aquarius.
utyikitya umfazi onomhlaza edlala ngothando nawe
Ukuhambelana kweScorpio kunye nePisces
ubuhlobo bokuhambelana ne-aquarius kunye ne-virgo
Ilanga kwi-libra inyanga kwi-taurus
indlela yokudlala ngothando nomntu we-sagittarius
capricorn indoda njengendoda
loluphi uphawu lwe-zodiac ngoJanuwari 26